कोरोनाबाट अमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ५ लाख नाघ्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट अमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ५ लाख नाघ्यो !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या २० हजार भन्दा बढी पुगेको छ ।
शनिबार एकै दिन १ हजार ८ सय ३० जनाको मृत्यु भएसँगै अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या २० हजार ५ सय ७७ पुगेको भएको हो ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकी राज्य न्यूयोर्कमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ६ सय २७ रहेको छ । त्यसपछि न्यू जर्सीमा २ हजार १ सय ८३, मिसिगनमा १ हजार ३ सय ९२, लुजियानामा ८ सय ६, मासासुचेट्समा ६ सय ८६ र क्यालिफोर्नियामा ६ सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा संक्रमितको संख्या ५ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ जना पुगेको छ । पछिल्ला केही दिनयता दैनिक ३० हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित र मृत्यु हुने दुवैका हिसाबमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो ।
इटालीमा आइतबार विहान ८ बजेसम्म १९ हजार ४ सय ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या भने १ लाख ५२ हजार २ सय ७१ रहेको छ । यस्तै स्पेनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ हजार ६ सय ६, भने संक्रमितको संख्या १ लाख ६३ हजार २७ पुगेको छ ।
फ्रान्समा अहिलेसम्म १३ हजार ८ सय ३२ जनाको कोभिड-१९ बाट ज्यान गइसकेको छ । संक्रमितको संख्या भने १ लाख २९ हजार ६ सय ५४ रहेको छ । बेलायतमा ९ हजार ८ सय ७५, इरानमा ४ हजार ३ सय ५७, बेल्जियममा ३ हजार ३ सय ४६ र नेदरल्याण्डमा २ हजार ६ सय ४३ जनाको ज्यान गएको छ ।
विश्वभर अहिलेसम्म कोभिड-१९ बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ८ हजार ८ सय १९ पुगेको छ । यस्तै संक्रमितको कुल संख्या १७ लाख ८० हजार २ सय ३९ जना पुगेको छ । अहिलेसम्म ४ लाख २ हजार ७ सय ७५ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।